Kufa Abantu Abalitshumi Lantathu Engozini Yomgwaqo eShamva
Kulabantu abalitshumi lantathu abafileyo kwalimala kakubi abalitshumi lathoba minwembili-18 engozini yokubheuka kwebhasi emgwaqweni osuka e Harare usiya e-Nyamapanda duzane lentuba le Shamva Turn Off Toll Gate.
Isikhulumeli samapholisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi abalitshumi babafileyo lihle laphelela khonapho ingozi isenzakala kukantike abathathu bafele esibhedlela seParirenyatwa.
Engozini le enzakale ngabo 11:47 ngoMvulo ntambama kunqikilane ibhasi yenkampani yeZUPCO ebivela kwele Malawi lemotha enkulu ethwala impahla eye nkampani yeMujawo Transport ebisiya lapho obekuvela ibhasi.
UChief Supt Nyathi uthi umtshayeli wetruck uWonderful Nyamurambe utshele amapholisa ukuthi uthe ebanga ebholohweni ubone kulempahla phakathi komgwaqo wasesima ecabanga ukuthi kungabe kungabantu abalele khonapho. Uthe esazama ukubona ukuthi ngabantu abaphilayo na loba hatshi kulapho ibhasi yeZUPCO ebithwele abantu abangamatshumi amane lantathu edlule igwegwa itruck yakhe yahle yaphuma umgwaqo yayawela esizibeni ngomhlubulo, abantu abalitshumi bahle bafela khonapho.
Amapholisa axwayisa abatshayeli ikakhulu abezimotha ezinkulu ukuthi batshayele ngonanzelelo bengagijimi ngsiqhubu esibi, ikakhulu ebusuku ukuze kulondolozwe impilo yabantu.